Ibhishi "i-treshka" ngaphansi kwegama lomshado i-Les Pyramides 3 lisendaweni yokuhlala yaseNabeul, ogwini, futhi ngesikhathi esifanayo eduze kwedolobha. Ihotela liyingcosana, kodwa lihle, futhi lilungele imindeni enezingane. Akuzona izinto ezimbi ezizozizwa lapha kanye nezibhangqwana, abantu abasha, kanye nabalandeli ukuba balale ogwini noma bahambe eminyuziyamu. Uma ungenayo imali eningi ephaketheni lakho, kodwa ufuna ukuchitha iholidi lakho endaweni ethile ezindaweni ezifudumele phesheya, sincoma ukuthi unake leli hotele. Hhayi ngaphandle kwesizathu izivakashi eziningi eza lapha eminyakeni eminingana elandelanayo.
Indawo, ukuthi ungafika kanjani
Ihhotela Les Pyramides 3 * ingafinyelelwa ezikhungweni zezindiza eziningana. I-Tunisia (Carthage) ibanga elilingana no-Anfida - nje ngamakhilomitha angaphezu kwamashumi ayisithupha. Futhi eMonastir - ikhulu namashumi amabili nanhlanu. Kusukela kwenye yezindawo zokuvakasha ezithandwa kakhulu kuleli zwe - i-Hammamet - ukusuka lapha kuphela amakhilomitha ayishumi nanhlanu, ngokuvamile ihhotela, elizinikezelwe esihlokweni sethu, libizwa kulezi zincwadi ze-Les Pyramides 3 Hammamet. Ungafika lapho nge-shuttle ibhasi. Futhi kusukela ezikhungweni zezindiza ukuya eNabeul uya kanye namabhasi, kanye nezitimela.
Ihhotela elingafinyelelwa yihhotela elisuka esiteshini noma esiteshini sesitimela. I-Nabeul isendaweni ehle kakhulu, ngakho-ke ihabhu elihle kakhulu lokuthutha. Kusuka lapha hamba ukukhuluma eTunisia - inombolo 102 igijima njalo isigamu sehora. Futhi umzila 104 uya e-Carthage sezindiza ngezinsuku zamasonto. Ngokuqondene ne-Enfid, ungafika lapho kusuka kuNabel nge-bhasi inombolo 106. Uma ufuna ukushayela ngqo emnyango wehhotela, bhala ukudlulisa noma uthathe itekisi.
Leli dolobha elwandle libizwa ngokuthi i-capital of potters. I-resort yona ngokwayo ayigxilile kakhulu, ayikho amahhotela anele, futhi akukho abantu abaningi kubo. Ngakho-ke, unethuba lokubona impilo eyiqiniso yabaseTunisia, uma ufika e-Les Pyramides 3. UNabeul uhlala ngesigqi somthetho wezinzalamizi evamile: ubuciko, ukuqoqa ama-oranges nezithelo zawo - ungabona konke lokhu ngokwakho. Ngaphezu kwalokho, izimakethe lapha azizona izakhamuzi, futhi amanani ayilumi. Futhi ekuzijabuliseni okudumile uHammetet - ukuphonsa itshe: i-minibus ingafinyelelwa engxenyeni yehora. Amahhotela lapha ashibhile, nakuba atholakala amamitha ambalwa ukusuka emabhishi amahle nomsindo we-surf. Lapha ungakwazi ukuphumula ngokuphumula, kodwa ungabi kude kakhulu nempucuko. Hamba uhambe kuleli dolobha elihle, uthole ukunambitheka kwezithelo ze-citrus, uthenge i-orange blossom, eyaziwa ngamazwe asendaweni, futhi uthathe izithombe lapho kungenzeka khona! Abathandi bezakhiwo ze-ceramics enhle ngesitayela sase-oriental, bajabule: lokhu kuyindawo yakho yokubhuka!
Insimu yase Les Pyramides 3 Nabeul
Ihotela liqukethe isakhiwo esimhlophe esinezitezi ezintathu, ama-cottages amaningana nama-bungalows anezitezi. Isakhiwo esikhulu siseduze nolwandle. Muva nje, ukulungiswa kwenziwe lapha. I-Territory ayiyona enkulu kakhulu, kodwa ihlelwe kahle, ikhululekile futhi iluhlaza. Kuzo zonke izimbali, izihlahla zezundu. Abavakatjhi bhala ukuthi konke kuhle kakhulu. Kukhona ukupaka izimoto, i-spa, njengamahhotela amaningi ase-Tunisia ase-beach. Izitolo eziningi ezahlukene, lapho ungathengisa cishe yonke into ngamanani ashibhile kakhulu. Eseduze - isitolo, ezihlukahlukene amathilomu. Izinyathelo ezimbili ezihamba phambili ihhotela elihle "I-Cheops", lapho ungaya khona kanye nezivakashi "Amapiramidi", hhayi nje ukuhamba, futhi usebenzise insimu, i-pool kanye nama-slide. Womabili amahhotela anomnikazi oyedwa.
I-Les Pyramides 3 ihhotela elikhulu. Kukhona izinkinga ezingamakhulu amathathu namashumi amahlanu kuwo. Zonke zinesethi esimisiwe sezinsiza, njengokuvamile kwi-"treshki" yaseTunisia. Wonke amakamelo afana ne-air conditioned, anamabhaloni amakhulu, avulekile kakhulu. Emadongeni, tile ngesitayela saseMpumalanga. Indlu yokugezela ihlelekile, ilineni namathawula zihlale zihlanzekile futhi zihlanzekile. Ithelevishini ikhuluma ikakhulukazi isiFulentshi, kodwa kukhona isiteshi esisodwa saseRashiya. Ukusetshenziswa kwe-mini bar kubhalwa - ngisho noma nje ugcina imikhiqizo yakho lapho. Amakamelo amaningi anombono wolwandle. Futhi ngokuhlala endaweni enjalo, awudingi ngisho nokukhokha okungeziwe. Futhi, ngaphandle kokudinga isicu, izingcezu zamashidi nethawula zifakwa ngaphandle, zifafazwe ngezimbali ezintsha. Ngokuvamile ungase uxazululwe kakhulu kunesikhathi esifanele, kodwa kulokhu ikamelo lakho selivele likhanya ngokuhlanzeka.
E-Les Pyramides 3 kune-Wi-Fi, mahhala izivakashi. Kodwa uthatha eduze kwase-lobby. Lapho ungaqasha futhi ukupheka kwama-different size. Nokho, bakhokhelwa. Uma unezinkinga nge-intanethi, ungaya ensimini ye "Cheops". Ngokuqondene nakho konke okunye, le nkimbinkimbi inezinsiza eziningi zemidlalo - i-aerobics (kuhlanganise namanzi), i-tennis, ukushaya ngomnsalo. Ebhishi ungadlala ibhola kanye ne-volleyball. Kukhona imidlalo yebhodi, kufaka phakathi amabhilididi. Kubantwana abangaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalolunye, iqembu livulekile, futhi izingane zikhona indawo yokudlala ngamaslayidi kanye nezimpikiswano. Usuku nobusuku, "izibani" ezikhanyayo. Imisebenzi eminingi ehlukene yokuxhumana, ama-discos. Ama-Animator azama kanzima kakhulu. Nsuku zonke imidlalo emisha, kusihlwa ubonisa, imincintiswano, ukudansa. Kukhona isikhungo sokuzikhandla esikhokhelwayo. Insimu yehhotela Les Pyramides 3 (Tunisia) ilungiselelwe ngokukhethekile abantu abakhubazekile ukuphumula lapho - izimpande ezindaweni zonke, kukhona amakamelo ahlelwe ngokukhethekile esakhiweni esithile, kanye nomkhakha ekudleni. Abasebenzi bezakhamuzi zehhotela babiza abantu abahle kakhulu abazama ukusiza nokuxazulula noma yiziphi izinkinga ezivela.
I-Les Pyramides 3 isebenza ohlelweni "Lonke Oluhlanganisiwe". Uma wakhetha lolu hlobo lokudla, uzobe ukhonza utshwala kusukela ngoyishumi ekuseni kuya phakathi kwamabili. Ngezinye izikhathi ikhokhwa. Indawo yokudlela eyinhloko ihlinzeka ngesidlo sasekuseni, sekuseni neyokudla, kanye nokudla okulula (ngehora). Uhlelo lonke "olubandakanya" lunikezwa ebhodini lokungcebeleka kanye ne-cafe echibini. Kukhona isiteji esitayela samaMoor, ne-disco. Kodwa uwasebenzise - kuphela ngemali eyengeziwe. Izivakashi ziyaneliseka kakhulu ngokudla, futhi umpheki wendawo ubizwa ngokuthi umlingo. Wasebenzisa kokubili ukudla kwezwe laseTunisia naseYurophu. Ukubuyekezwa okuhle kwezinyama nezinhlanzi izitsha, ama-saladi kanye nama-garnishes, ungakhulumi ngamaqebelengwane, ama-buns, i-halva enemibala kanye neminye imikhiqizo ye-confectionery. Kukhona ngisho nezinhlanzi zasolwandle. Utshwala luthululelwa ngokuqondile emabhodleleni, ungahlaziyi. Liqueur yasekhaya "iCedratin" inhle. Endaweni yokudlela, uvame ukunikezwa itafula elithile, bese ungadingeki ukuba ufune indawo.
Ihhotela Les Pyramides 3 linobhishi lwalo oluqinile futhi namachibi amabili okubhukuda (emoyeni nasendlini, evuthayo). Ugu lapha, njengezindawo eziningi zokubhuka zaseTunisia, kunesihlabathi. Imibhede ye-sun kanye nama-ambulula eduzane ne-echibini nasegwini asuke mahhala. Uma ngokuzumayo into engekho, "i-whiplash" izoletha konke okulahlekile. Ulwandle lufudumele, lucacile, injabulo nesimo sezulu esiphezulu kule nkathi cishe akwenzeki neze. Ebhishi kunamanzi amaningi okukhangayo - ama-parachute, amaphilisi nezinto. Iya olwandle cishe imizuzu emibili ensimini yehhotela. Ibhishi lihlanzekile, lihlale lihlanzwa. Ihhotela "Cheops", njengoba sekushiwo kakade, vumela izivakashi zendawo yayo iPiramidi. Lokhu kusebenza futhi ebhishi namasevisi ayo.
Ukuze ujwayele izikhangisi zendawo, kwanele ukushiya ihhotela Les Pyramides 3. Nabeul ingxenye yesigamu sehora ukusuka ehhotela. Udinga ukuhamba uhambe olwandle, udlulise isitolo "Monopri", bese uphawu lomuzi - okhuphuka e-jug of pine - futhi uwela emagcekeni amadala (iMedina). Kukhona imakethe enkulu cishe nsuku zonke, ikakhulukazi ngoLwesihlanu. Ngaphambi kwemakethe kuyimyuziyamu ukuthi izivakashi zinconywa kakhulu ukuba zivakashele. Ungahamba futhi emigwaqweni yezitolo kanye nezitolo, wazi impilo yendawo. Izivakashi ziyancoma ukuthi zibheke epaki yamanzi (ehhotela eliseduzane elithi "Cheops") nge-slides amahle - izingane lapho ziyakuthanda ngempela. Uma ufuna ukuhamba ezweni lonke, khona-ke ukukusiza - isiteshi sesitimela eNabeul. Kusuka lapho izitimela ziya eCarthage, e-Sousse, eTunisia. Yiqiniso, kusekuqaleni: izindiza zokuqala ezinyangeni eziyisithupha ekuseni. Kodwa kukhona ithuba lokubona ngempela imizi ehlukene. Izitimela ziyashesha, zihle, zikhululekile futhi zihlanzekile. Futhi njengoba ungaya esidlweni sasekuseni kusuka ezinhlanu ekuseni, uzobe nesikhathi sokudla ngaphambi kokuhamba. Ebhayisikeni ye-shuttle kungenzeka ukufika emithonjeni yamafutha e-Korbus. Ukuhamba okuhlelekile, akunandaba, uyayithengisa ehhotela noma kusuka kwezinye iziteshi zokuvakasha - namanje kubiza kakhulu.
Ebhekene nokubuyekezwa kwezivakashi eziningi, isinqumo sokuza e-Hotel Les Pyramides 3 (i-Tunisia) sathonywe intengo yalolu hambo. Futhi kungukuthi ngisho nangesikhathi senkinga nokukhuphuka kwamanani kubo bonke nabo bonke abantu abanezimali ezingenayo bangakwazi ukuphumula lapha. Amakamelo aqashiwe ama-ruble ayizinkulungwane ezimbili ngosuku (amabili). Yiqiniso, ezinye izinsizakalo azifakiwe ezindlebeni zohambo. Isibonelo, ensimini yehotela ifakwe ama donuts amnandi kakhulu - ama-dinars amabili. Izingane ziyajabula nazo. Qasha indawo encane ephephile egumbini lokungcebeleka - idayari eyodwa ngosuku, ezinkulu - ezintathu. I-TND iwukusetshenziswa kwe-mini-bar (akukho iziphuzo). I-Souvenirs ingcono ukuthenga eNabeul - yinto eshibhile kunawo wonke amadolobha aseTunisia. Uma unebhodi lesigamu, futhi udla kwenye indawo, i-pizza enkulu nenhlanzi ibiza ama-dinars amahlanu, futhi i-juice esanda kumiswa - eyodwa. Izintengo ezinhle esitolo "Carrefour". Izinsuku zikhona i-dinars eyodwa nengxenye, kanti i-halva - 4-6. Amadolobha aseduze angafinyelelwa ngamabhasi. Ngenxa yalokhu kuyadingeka ukunikeza isigamu noma ama-dinars amabili ngomuntu ngamunye. 4-5 I-TND ithengela ithikithi esitimeleni. Taxi eya edolobheni nasemuva - 3-4 dinars. I-Nabeul iyisiqalo esihle kakhulu sokuhamba ngezindawo ezihlukahlukene, futhi izivakashi eziningi ziyaqiniseka ngalokhu.
Ihhotela Les Pyramides 3 Nabeul: ukubuyekezwa ngamaholide
Ngokuvamile abalindeli okuningi kusuka "treshkas" futhi bathathe izaphulelo kuphela ngenxa yolwandle nosanga. Kodwa lapha uzothola okuningi kakhulu kunalokho owakulindele: inkonzo enhle kakhulu, ukudla okumangalisayo nokuvakasha okuthakazelisayo. Kule hotela hhayi abantu abaningi kakhulu - kufaka phakathi yokudlela, ogwini nasolwandle. Lokhu kusho ukuthi ayikho imigqa, futhi wonke umuntu unama-sunbeds anele. Izisebenzi zehhotela zibangelwa imizwelo emihle. Yindawo yangempela yokuhlala - wonke umuntu uyamomotheka, ukubingelela, ezama ukusiza. Nakuba izisebenzi eziningi zikhuluma isiFulentshi nesiNgisi, uzohlale uqondwa, ngisho noma ungakhulumi lezi zilimi. Ihotele linabantu abaningi baseYurophu, ngakho-ke isimo sihloniphekile. Ihotela lithanda ukuphumula kanye nabantu bendawo, elikhuluma ngekhwalithi elihle kanye nezishibhile. Ithimba le-animators lizohlala lijabule futhi likhokhise kunoma yisiphi isimo sezulu. Ukubuyekezwa kwezivakashi kubonisa ukuthi "inkanyezi" yehhotela ihlehlisiwe, empeleni, ifanele "ezine" eziqinile.
Ihhotela Retreat Anjuna 3 * (Anjuna, India) izithombe kanye nokubuyekeza
I-Delta ye-Hotel (i-Mallorca / iSpain): isithombe nokubuyekeza
Yini okufanele ibe ikhala eliphelele?
Coalition LIH: uhlu lamazwe iqhaza. Yimaphi amazwe ayingxenye mfelandawonye wokulwa LIH?
Benua Pulvord - Belgian umlingisi ahlekisayo ne indlela zefilosofi ekuphileni
"Ukugxila kwePussy": abadlali kanye nezindima